Hong Kong Waini & Dine Mutambo Unofumura Line-Up ye 34 Gastronomic Zvakaitika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Hong Kong Nhau » Hong Kong Waini & Dine Mutambo Unofumura Line-Up ye 34 Gastronomic Zvakaitika
Kuputsa Hong Kong Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Hong Kong Waini & Dine Mutambo
Mweya wekugona -kuda weHong Kong uye rudo rwehupenyu hazvina kutapudzwa munzira ipi neipi nedenda, uye izvi zvinoratidza mukugadzirwa kweHong Kong Waini & Dine Mutambo uyo unomhanya kubva munaNovember 11 kusvika Zvita 15, 2020.
Kazhinji chiitiko che-mu-munhu, sezvakange zviri zviitiko zvakawanda munguva dzekare kutenderera pasirese, iyo Hong Kong Waini & Dine Mutambo, wakarongedzwa neHong Kong Tourism Board (HKTB), yakaronga zvine hungwaru kuenda kumberi ne "online + isingaiti" fomati kekutanga. Izvi zvinopa vateereri kumba nekune dzimwe nyika chiitiko chitsva chegastronomic chisina kusungwa nenguva nematambudziko enzvimbo.
Mutambo uyu unopa zvinonakidza zvepamhepo zviitiko, zvinosanganisira Online Waini Dura rine zvishoma zvisingawanzo uye zvipo zvakakosha, uye inorarama-yakabikwa yekubika uye waini-inonaka tambo dzepamhepo pane imwechete-inomira online chikuva. Kuchave nekubika-pamwe nemakirasi uye mhenyu mademo kubva kuMichelin-ane nyeredzi mashefu, waini inonaka nevane mukurumbira sommeliers, doro pairing nevabiki vemunharaunda, uye nezvimwe.
Sachigaro weHKTB Dr. YK Pang akatsanangura danho rakakosha: "Hong Kong Waini & Dine Mutambo yave iri imwe yezviitiko zvinozivikanwa pakati pevagari nevashanyi zvakafanana kubvira payakatangwa makore gumi apfuura. Kunyangwe kuputika kweCOVID-19 gore rino, tinotarisira kuti vanhu vanogona kuramba vachinakidzwa netsika yekudyira yakasarudzika yeHong Kong vachipa mikana yebhizinesi kune veko F & B chikamu chemamiriro ekunze akaomarara. Kuronga Mutambo uyu kunotibvumidza kuzadzisa zvinangwa zvese pasina kukanganisa hutano hweveruzhinji nekuchengeteka. ”
Vicky Cheng weVEA Restaurant & Lounge
Yakareruka Online Masterclass
Kune vateereri vepasirese, zvinojekesa zvechiitiko ndezve dzakasiyana dzakateedzana makumi matatu neshanu pamhepo mamasterclass ayo vatariri vanogona kunakidzwa nemvumo yekubhadhara. Iwo masterclass anozove akararama-kutenderera pane WainiDineFestival.DiscoverHongKong.com kweMatatu neMugovera neSvondo kubva munaNovember 21 kusvika Zvita 6 uye vozoita kuti vawanikwe pakuona kudiwa. Ivo vanofukidza dzakasiyana siyana misoro kubva pawaini nemweya mafambiro ekudya kwakanaka, kudya zvine hutano, uye hunyanzvi hwekudya chikafu Zvekunze zviitiko zvevatengi vemuno zvinosanganisira zvakasarudzika madhiri uye gastronomic zviitiko zvinopihwa nemazana ezvitoro zvekudyira muHong Kong kunakidzwa.
Shane Osborn weArcane uye Cornerstone
Joinha neCheka-pamwe Makirasi
Nezve kuravira kwechokwadi kweHong Kong, varidzi vekumba vanogona kufambisa dzakasiyana siyana dzekubika-pamwe nemakirasi uye nekuwedzera kwavo kwega mabhuku ekubika. Executive Chef Adam Wong weForamu yekudyira acharaira vaoni maitiro ekugadzira yake Hong Kong-dhizaini yakabikwa mupunga Ah Yat Yakabikwa Rice izvo hazvifanirwe kupotsa. Kune avo vari kutsvaga kukodza hunyanzvi hwavo hwekudyira mukicheni, rarama kuratidzira nevakapemberera vafi vekuHong Kong vakadai saMichelin-nyeredzi Shane Osborn weArcane naCornerstone naVicky Cheng weVEA Restaurant & Lounge mukana wakanaka wekutarisa nekudzidza zvitsva matipi uye manomano.
James Suckling, mutsoropodzi anozivikanwa pasi rese
Oenophiles nevanoda waini zvakafanana vanogona kuterera kuhurukuro dzewaini naHong Kong-based, mutsoropodzi anozivikanwa pasi rese James Suckling naMaster weWine Debra Meiburg, vanozogovera kurudziro pamisoro yenyaya "New Wave Bordeaux" uye "The Pacific West" zvichiteerana. . Kuyamwa kunounza mabhodhoro matatu ewaini nyowani inokwanisika kubva kuBordeaux.
"Hong Kong nderimwe remaguta ewaini akanakisa pasi rese, rinomira padanho rakaenzana neLondon neNew York," akadaro Suckling. “Hong Kong yasarawo iri musika wekutanga wekutengesa kunze kwenyika maBordeaux waini. Mutambo wegore rino uchasvika kuvanhu vazhinji pasirese, uye ndiri kuutarisira. ”
Shirley Kwok, muvambi wevegan bhekari Iyo Cakery
Unganidza Round, Vakadzi!
Mutsetse wemadzimai-wese unoratidzwa munaNovember 28. Themed Lady's Talk, vashanu vanokurudzira vari kuzunza chikafu cheHong Kong uye chinwiwa chiitiko vese vanozogamuchira masterclass yekugovana yakasarudzika kutora pane kwavo pachavo hunyanzvi. Shirley Kwok, muvambi wevhegan bhekari Iyo Cakery, achatungamira yekubika-pamwe nekirasi umo vataridzi vanogona kugadzira yavo vegan uye yakanatswa isina shuga-isina Apple Pie. Musoro Chef Vicky Lau weTATE Dining Kamuri ichatungamira vatariri kuburikidza nekuratidzira mhenyu maitiro ekugadzira Crispy Zai neMushroom Soup. Certified nekuda sommelier Jamie Lo, weAsia-Pacific mudiki Master weWine Sarah Heller, uye mutambi-akachinja-winemaker Bernice Liu vachatora vatori vechikamu kuburikidza nekwavo kwekuravira kwesosi, champagne, uye waini zvichiteerana.
Vicky Lau, Musoro Chef weTATE Dining Kamuri
Kungwara uye Kugadzira = Wakanaka Mutambo
"Kunyangwe zviitiko zvikuru zveHKTB zvakamiswa kwenguva yakati, tiri kushandisa huchenjeri hwedu uye zviwanikwa kuti tigadzirise nekugadzirisa kukwidziridzwa kunoenderana nedenda," akadaro Sachigaro weHKTB, Dr. Pang. “Ndicho chikonzero nei tafunga kuti titangezve kuita mega zviitiko uye titore fomati nyowani 'yepamhepo + isingaenderane' yeHong Kong Waini & Dine Mutambo 2020. Ichi chiitiko chitsva chakagadzirirwa hutsva hutsva yatinozviwana tiri mairi. "HKTB iri kuita izvi kuona kuti vanhu vanogona kujoina chiitiko chegore rino kunyangwe hosha iyi uye kubatsira mabhizinesi edu akaomarara kusimudzira zvigadzirwa zvavo uye kuvhura mikana mitsva yebhizinesi munguva dzino dzakaoma."
"Chinangwa chedu ndechekuenderera mberi nekupa hupfumi kuHong Kong kukurudzira uye kutumira mashoko akanaka kune nyika kuti mweya wekugona weHong Kong uye rudo rwehupenyu hazvina kuderedzwa neimwe nzira nedenda, uye kuti tinogona kushandisa hunyanzvi hwedu kuratidza zviitiko zvedu zvemasaini apo isu tichigadzirira kugamuchira vashanyi vanodzoka kuguta redu, "akawedzera Dr. Pang.
Hong Kong Waini & Dine Mutambo yakatangwa muna2009, mushure mekunge Hong Kong neBordeaux vasaina Memorandamu yeKunzwisisa nezveKubatanidzwa muBhizinesi rine chekuita newaini. Chiitiko chikuru chekunze chakakurumidza kuve hurukuro yeguta uye chakatumidzwa seimwe yepasirose yepamusoro yepasi rese yezvikafu newaini mhemberero neForbes Traveler.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Hong Kong Waini & Dine Mutambo 2020 uye yakazara chirongwa chepamhepo masterclass, ndapota shanya WainiDineFestival.DiscoverHongKong.com
Kuti uwane rumwe ruzivo uye a purogiramu yeInternet Masterclass, tinya pano.